Wasiirka Warfaafinta Ee Somalia Oo Maanta Ka Horsheegay Golaha Baarlamanka In Hawada Wixii Laysku Odhanjiray Somaliya Laga Maaamuli-doono Muqdisho(Sawiro) | Salaan Media
Wasiirka Warfaafinta Ee Somalia Oo Maanta Ka Horsheegay Golaha Baarlamanka In Hawada Wixii Laysku Odhanjiray Somaliya Laga Maaamuli-doono Muqdisho(Sawiro)
July 24, 2013 Muqdisho(SM) – Waxaa maanta loo akhriyay baarlamanka Somalia hindise sharciyadeedka duulista rayidka ah iyo saadaasha hawada, waxana kulanka ka qeyb galay wasiirka warfaafinta,boostada, isgaadhsiinta iyo gaadiidka si uu mudanayaasha uga hor akhriyo hindise sharciyadeedkan.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaarada ay la wareegi doonto hawada Soomaaliya 31bisha December ee sanadkan,horaanta sanadka soo socdana hawada soomaaliya si toos ah looga maamuli doono magaalada muqdisho. Wasiirka ayaa sheegay in heshiiska uu qeyb ka yahay in laga bilaabo badhtamihii sanadkan aan qalab cusub oo danbe la geeynin garoonka diyaaradaha ee dalka Kenya oo la keeno garoonka Adan cadde ee magaalada muqdisho.
Wasiirka wasaarada warfaafinta, boostada, isgaadhsiinta iyo gaadiidka ayaa beeniyay wararka sheegaya in hawada soomaaliya laga maamuli doono meel ka baxsan magaalada Muqdisho sida caasimada Jamhuuriyaada Somaliland ee Hargaysa,isagoo sheegay in xarunta hay’adda ay tahay magaalada muqdisho “oo aan laga rari Karin”.
Dhageysiga warbixinta wasiirka kaddib ayaa waxaa su’aalo laga weydiiyay u badnaa sharciga iyo habka loo maamulayo hawada Soomaaliya, iyagoo ugu dambeyn guddiga arrintan qaabilsan laga dalbaday inay kasoo baaraan-dagaan ayna dib ugu soo celiyaan baarlamaanka, waxaana wasiirka laga sugayaa inuu mar labaad baarlamaanka ka jeediyo warbixin sharcigan ku saabsan.
Intaas Kadib waxaa shirka baarlamaanka soo xidhay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Maxamed Ashkir Bootaan
Salaanmedia Muqdisho Office